विश्वकपमा युरोपियन दबदबा | नेपाल इटाली डट कम
विश्वकपमा युरोपियन दबदबा
July 7, 2010 — nepalitaly
जोहानसबर्ग/ चालू विश्वकपको सुरुवाती चरणमा युरोपेली मुलुक कमजोर देखिए　। त्यहाँका नाम कमाएका ठूला स्टार खेलाडी ‘फ्लप’ भए　। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा युरोपको नियन्त्रणलाई दक्षिण अफिकामा कसैले ‘हाइज्याक’ गरेको भान पथ्र्यो　। तर, गएको सातादेखि ती सबै धारणा परिवर्तन हुन थालेका छन्, विश्वकपका चार सेमिफाइनलिस्टमध्ये तीन त युरोपका छन्　। परम्परागत शक्तिका साथ युरोप फेरि विश्वकपमा फर्किएको छ　।
सन् १९३४ देखि घटीमा एक युरोपेली टोलीले विश्वकपको फाइनलमा स्थान बनाएको परम्पराले निरन्तरता पाउनेछ　। हो, १९५० को विश्वकपको अन्त्यमा ब्राजिल र उरुग्वे मात्रै विजेताका रूपमा देखिएका थिए, तर त्यो विश्वकपमा आधिकारिक फाइनल खेलाइएको थिएन　।
यस विश्वकपमा छनोट भएका १३ मध्ये ६ युरोपेली टोलीले मात्रै दोस्रो चरणमा स्थान पाएका थिए　। दोस्रो चरणमा दक्षिण अमेरिकाका पाँच र एसियाका दुई टोलीले स्थान बनाएका थिए　। जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको पावर हाउस मानिने युरोपको कमजोरीका रूपमा लिइयो　। अनि यो विश्वकप कुनै एक दक्षिण अमेरिकी मुलुकले जित्ने दाबी पनि गरियो　।
ती सबैलाई बिर्सने हो भने अब विश्वकपमा युरोपबाहिरको एकमात्र मुलुक उरुग्वेको मात्रै प्रतिनिधित्व रहेको छ　। त्यही उरुग्वे मंगलबार फाइनल यात्राका लागि नेदरल्यान्डसँग भिड्दै छ　। उरुग्वेले पनि हारको सामना गरेको खण्डमा कुनै युरोपेली मुलुकले पहिलोपटक आफ्नो महादेशभन्दा बाहिर विश्वकप उचाल्ने पक्का पनि हुनेछ　। बुधबारको सेमिफाइनलमा जर्मनी र स्पेनको भिडन्त हुँदै छ　।
‘मेरो टोलीको प्रदर्शन प्रशंसायोग्य छ, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मात्र होइन, च्याम्पियन बन्नलायक छ,’ अर्जेन्टिनालाई हराएपछि जर्मनीका प्रशिक्षक जोकिम लोजले भनेका थिए　। वास्तवमा अहिले जर्मनी उपाधिको पहिलो हकदार बनेको छ, खेलस्तरका आधारमा　।
विश्वकपमा ३२ टोलीको सहभागिता रहने परम्पराको थालनी भएयता समूहमा चरणमा युरोपले अहिले जति नराम्रो प्रदर्शन कहिल्यै गरेको थिएन　। विश्व-विजेता इटाली र उपविजेता प|mान्स पहिलो चरणबाटै बाहिरिएपछि त युरोप झन कमजोर देखिएको थियो　। इटाली ‘बूढा’ खेलाडीले भरिपूर्ण थियो　। सो टोलीका नौ खेलाडी त ३० वर्षभन्दा बढीका थिए जसमा, कप्तान ३६ वषर्ीय फाबियो क्यानाभारोसमेत पर्छन्　। फुटबललाई युवाको खेल भनिन्छ, इटालीले दक्षिण अपि|mकामा खुट्टा जमाउन नसकेको एक कारण त्यो पनि हो　।
२००८ को युरोपेली च्याम्पियनसिपमा पनि पहिलो चरणबाटै बाहिरिएको प|mान्सले कमजोर प्रदर्शनप्रति भने त्यही आश्चर्य मानिएन　। तीनपटकको विश्वविजेता जर्मनी भने लगातार तेस्रोपटक विश्वकपको सेमिफाइनलमा पुगेको छ　। मिरोस्लाभ क्लोज चम्कँदा जर्मनीले पछिल्लो दुई खेलमा नै आठ गोल गरिसकेको छ　। साथै क्लोज ब्राजिलका रोनाल्डोको १५ विश्वकप गोलको कीर्तिमानबाट पनि एक गोलले पछाडि छन्　।
उता डेभिड भिल्लाको प्रदर्शनबाट स्पेनले ६० वर्षपछि पहिलोपटक विश्वकपको सेमिफाइनलमा स्थान बनायो　। स्पेन र जर्मनीबीच हुने सेमिफाइनलाई यो विश्वकपको फाइनलभन्दा राम्रो खेलका रूपमा लिइनेछ　। जसलाई युरो २००८ को फाइनलको दोस्रो भागका रूपमा पनि लिन सकिन्छ　।
नेदरल्यान्डलाई भने सधैँ अभागी टोलीका रूपमा लिइन्छ　। ‘उत्कृष्ट टोली तर कहिल्यै विश्वविजेता बन्न सकेन,’ १९७४ र १९७८ मा फाइनलसम्म पुगेको डच टोलीका बारे यस्तै भनिन्छ　। दक्षिण अपि|mकामा खेलेका सबै खेल जित्ने एकमात्र टोली नेदरल्यान्ड नै हो　। साथै सो टोली २४ खेलदेखि अपराजित पनि छ　।
दुईपटक विश्वविजेता बने पनि उरुग्वेले १९७० पछि मात्रै विश्वकपको सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको हो　। उरुग्वेले प्लेअफमा कोस्टारिकालाई हराएर यो विश्वकपमा खेल्न पाएको थियो　।
आज भएको उरुगुवे र नेदरल्याडको खेलमा नेदर्ल्यान्डले उरुगुवेलाई ३-१ ले पराजित गर्दै फाइनल खेलको लागि स्थान सुरछित बनाएको छ भने अब जर्मनी र स्पेन बिच हुने खेलमा उक्त खेलको बिजयी सँग नेदर्ल्यान्डको सामना गर्नु पर्ने छ।
« बोर्ड टपर छात्राहरु के बन्न चाहन्छन्?
बीस वर्षपछि नेपाल मरुभूमि बन्ने ! »